1 Ihe E Mere 29 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Mbụ 29:1-30
Onyinye ndị mmadụ nyere maka ụlọ nsọ ahụ (1-9)
Ekpere Devid kpere (10-19)
Otú ndị mmadụ si na-enwe aṅụrị nakwa ihe gbasara ọchịchị Solomọn (20-25)
Ọnwụ Devid (26-30)
29 Eze Devid gwaziri ndị Izrel niile, sị: “Solomọn nwa m, onye Chineke họọrọ,+ bụ obere nwa, o nwebeghịkwa ihe ọ ma.*+ Ma ọrụ a ga-arụ abụghị obere ọrụ, n’ihi na ụlọ nsọ* a na-aga ịrụ abụghị nke mmadụ, kama ọ bụ nke Jehova Chineke.+ 2 Agbakwaala m mbọ otú ike m hà kwakọta ọlaedo maka ihe ndị a ga-eji ọlaedo arụ n’ụlọ Chineke, kwakọtakwa ọlaọcha maka ihe ndị a ga-eji ọlaọcha arụ, nakwa ọla kọpa maka ihe ndị a ga-eji ọla kọpa arụ. Akwakọtakwala m ígwè maka ihe ndị a ga-eji ígwè arụ,+ nakwa osisi+ maka ihe ndị a ga-eji osisi arụ. Ihe ndị ọzọ m kwakọtara bụ nkume ọnịks, nkume a ga-eji ụrọ doo, obere okwute ndị tụrụ àgwà, ụdị nkume ọ bụla dị oké ọnụ,* nakwa nkume alabasta karịrị akarị. 3 Enyekwala m ọlaedo m na ọlaọcha m+ maka ụlọ Chineke m,+ n’ihi na ihe gbasara ụlọ Chineke m masịrị m. Enyekwala m ọtụtụ ihe ndị ọzọ maka ụlọ ahụ dị nsọ. 4 Ụfọdụ n’ime ihe ndị m nyere bụ puku talent* ọlaedo atọ (3,000) si Ofa,+ puku talent ọlaọcha asaa (7,000) a nụchara anụcha a ga-eji machie ahụ́ ụlọ dị iche iche, 5 ọlaedo maka ihe ndị a ga-eji ọlaedo arụ na ọlaọcha maka ihe ndị a ga-eji ọlaọcha arụ nakwa maka ọrụ niile ndị omenkà ga-arụ. Ò nwere onye n’ime unu chọrọ inye Jehova onyinye taa?”+ 6 Ndị isi ọnụmara dị iche iche, ndị isi ebo dị iche iche n’Izrel, ndị isi nke otu puku otu puku ndị agha na ndị isi nke otu narị otu narị ndị agha,+ nakwa ndị isi na-ahụ maka ọrụ eze+ wee bido inye onyinye. 7 Ha nyere puku talent ọlaedo ise (5,000), puku mkpụrụ ego darik* iri (10,000), puku talent ọlaọcha iri (10,000), puku talent ọla kọpa iri na asatọ (18,000), nakwa ígwè dị otu narị puku (100,000) talent maka ịrụ ụlọ ezi Chineke. 8 Ndị nwere nkume ndị dị oké ọnụ* nyekwara ha ka e dowe ha ebe a na-edowe akụ̀ n’ụlọ Jehova. Ọ bụ Jehayel+ onye si n’agbụrụ Geshọn+ na-elekọta ebe ahụ. 9 Ha ṅụrịkwara ọṅụ n’ihi onyinye ndị a ha nyere, n’ihi na ha ji obi ha niile nye ha Jehova.+ Obi bụkwa Eze Devid sọ aṅụrị. 10 Devid nọkwa n’ihu mmadụ niile too Jehova. Ọ sịrị: “Ka a na-eto gị, Jehova bụ́ Chineke Izrel bụ́ nna anyị, ruo mgbe ebighị ebi.* 11 Jehova, ị bụ onye ukwu.+ Ị dịkwa ike.+ Ị bụ onye ọma, dịrịkwa ebube.+ E kwesịrị ịna-asọpụrụ gị n’ihi na ihe niile dị n’eluigwe na n’elu ụwa bụ nke gị.+ Jehova, ọ bụ gị bụ eze.+ Ị na-egosikwa na ọ bụ gị bụ Ọkaakaa. 12 Akụnụba na ebube na-esi n’aka gị.+ Ọ bụkwa gị na-achị ihe niile.+ I siri ezigbo ike,+ bụrụkwa onye ukwu.+ I nwere ike ime ka mmadụ bụrụ onye ukwu,+ nweekwa ike inye mmadụ niile ike.+ 13 Ugbu a, Chineke anyị, anyị na-ekele gị, na-etokwa aha ọma gị. 14 “Ma, ònye ka m bụ, ole ndị ka ndị m bụkwa, nke na anyị nwere ike iji obi anyị niile nye ụdị onyinye a? N’ihi na ihe niile si n’aka gị, ihe anyị nyere gị sikwa n’aka gị. 15 Ị ma na anyị bụ ndị mbịarambịa na ndị ọbịa dị ka ndị nna nna anyị niile.+ N’ihi na ụbọchị ndụ anyị n’elu ụwa dị ka onyinyo.+ E wezụgakwa gị, anyị enweghị olileanya. 16 Jehova bụ́ Chineke anyị, ihe a niile anyị kwadebere iji rụọrọ gị ụlọ a ga-anọ na-eto aha nsọ gị si n’aka gị. Ha niile bụkwa nke gị. 17 Chineke m, ama m nke ọma na ị na-enyocha obi,+ nakwa na ihe onye na-akwụwa aka ọtọ*+ na-atọ gị ụtọ. M ji obi ọcha m nye ihe ndị a niile. Obi dịkwa m ụtọ ịhụ ka ndị gị bịara ebe a ji obi ha niile na-enye gị onyinye. 18 Jehova bụ́ Chineke Ebreham, Aịzik, na Izrel, bụ́ ndị nna nna anyị, biko, mee ka ndị gị na-enwe obi inye ihe otú a ruo mgbe ebighị ebi, meekwa ka obi ha dịrị n’ebe ị nọ.+ 19 Nyekwara Solomọn nwa m aka ka obi ya niile dịrị n’ebe ị nọ+ ka o nwee ike na-edebe iwu gị,+ na-eme ihe i kwuru, na-esokwa ntụziaka gị. Nyere ya aka ka o mee ihe a niile, rụọkwa nnukwu ụlọ nsọ a m kwakọtara ihe a ga-eji arụ ya.”+ 20 Devid gwaziri ndị Izrel niile, sị: “Toonụ Jehova bụ́ Chineke unu.” Ha niile wee too Jehova bụ́ Chineke ndị nna nna ha, hulatakwa kpọọrọ Jehova isiala, kpọọkwara eze. 21 Ha wee na-achụrụ Jehova àjà. Ruokwa echi ya, ha nọ na-achụrụ Jehova àjà a na-esu ọkụ.+ Ihe ndị ha ji chụọ àjà bụ otu puku (1,000) oké ehi, otu puku (1,000) ebule na otu puku (1,000) ụmụ ebule. Ha chụkwara àjà mmanya,+ chụọkwa ọtụtụ àjà maka ndị Izrel niile.+ 22 Ha nọkwa n’ihu Jehova n’ụbọchị ahụ na-enwe aṅụrị, na-eri, na-aṅụkwa.+ Ha chikwara Solomọn nwa Devid eze nke ugboro abụọ, teekwa ya mmanụ n’ihu Jehova ka ọ bụrụ onye ndú.+ Ha họpụtakwara Zedọk ka ọ bụrụ onye nchụàjà.+ 23 Solomọn nọchiri Devid nna ya, nọrọ n’ocheeze Jehova+ na-achị. Ihe nọkwa na-agaziri ya, ndị Izrel niile ana-erubekwara ya isi. 24 Ndị isi niile,+ ndị niile bụ́ dike n’agha,+ nakwa ụmụ Eze Devid niile+ nọ na-erubere Eze Solomọn isi. 25 Jehova mekwara ka Solomọn bụrụ nnukwu mmadụ n’anya ndị Izrel niile, meekwa ka ọ dị ebube karịa eze ọ bụla chịrị Izrel tupu yanwa achịwa.+ 26 Otú a ka Devid nwa Jesi si chịa Izrel niile. 27 Ọ chịrị Izrel afọ iri anọ. Ọ chịrị afọ asaa na Hebrọn,+ chịakwa afọ iri atọ na atọ na Jeruselem.+ 28 Ọ nwụrụ mgbe o mere ezigbo agadi.+ Ogologo ndụ ọ dịrị, akụnụba o nwere, na otú o si dị ebube jukwara ya afọ. Solomọn nwa ya nọchiri ya, malite ịchị.+ 29 E dere akụkọ ndụ Eze Devid, malite ná mbido ruo ná ngwụcha, n’akwụkwọ. Ọ bụ Samuel onye ọhụ ụzọ, Netan+ onye amụma, na Gad+ onye ọhụụ dere ya. 30 Ha dekwara ihe ndị mere mgbe ọ bụ eze, ike ọ kpara, ihe ndị mere n’oge ọ nọ ndụ, ihe ndị mere n’Izrel, nakwa n’alaeze ndị gbara ha gburugburu.
^ Ma ọ bụ “isi akabeghịkwa ya.”
^ Ma ọ bụ “obí eze.”
^ Ma ọ bụ “ụdị nkume ọ bụla pụrụ iche.”
^ Darik bụ mkpụrụ ego ndị Peshia e ji ọlaedo kpụọ. Gụọ B14.
^ Ma ọ bụ “nkume ndị pụrụ iche.”
^ Ma ọ bụ “malite mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi.”
^ Ma ọ bụ “na-eme ihe ziri ezi.”
1 Ihe E Mere 29